> Resource > Video > VOB Player: Sida loo Play VOB Files
File VOB waa qaab DVD in inta badan ku jira macluumaad sida DVD maqal ah, video, subtitles, bedeley iyo iwm unahay dad doonayay in ay daawadaan DVDs on kombiyuutarada ay ka; ha noqoto sabab u sahlanaato ama sababta oo ah ciyaaryahan ay DVD aan shaqaynayn. Si kastaba ha ahaatee, ma dhamaan ciyaartoyda warbaahinta kombiyuutarka taageeri karaan haya'ad ee files VOB.
Labada dhisay-in ciyaartoyda warbaahinta in Windows iyo Mac madal sida Windows Media Player iyo QuickTime aan haysan taageerada ay u hayaan qaab VOB ah. Si loo xalliyo arrimaha incompatibility this, laga yaabee in aad qaadan kartaa eegno galay ciyaartoyda 5 VOB hogaanka caawimaad.
Alternative 2: ciyaaryahan VLC Media
Iyadoo ciyaartoyda VOB, waxaad ka ciyaari kartaa kaliya files VOB habsami on your computer, aan weli waad isticmaali kartaa buuxa ciyaartoyda VOB sababta oo ah arrin incompatibility ah. Sidaas xalka ugu wanaagsan waa in la badalo VOB si kasta oo kale oo aad rabto, si aad u ciyaari karo files VOB in ciyaaryahan, codsi iyo qalabka iwm Si aad u samayn, waxaad isticmaali kartaa Video Converter ( Video Converter u Mac ) si ay u qabtaan diinta video. Tusaale ahaan, waa xal wanaagsan in la badalo VOB in MP4 for loo maqli karo ee inta badan qalabka sida iPhone iyo PSP iwm
Talaabada 1: files Import VOB ay si toos ah u soo jiiday files barnaamijkan.
Talaabada 2aad: In ka Output Qaabka Murayaad, xulo qaab doonayo adigoo riixaya Qaabka icon in la furo liiska qaab wax soo saarka.
Talaabada 3: Hit ka badalo button on geeska hoose ee midigta ah interface ugu weyn.
The media player VLC ayaa si weyn loo isticmaalaa in Mac (libaax oo buurta ka mid ah) iyo madal Windows. Dad badan waxay jecel yihiin in ay u isticmaalaan inay ku ciyaaraan files ay warbaahinta u badan sababta oo ah ciyaaryahanka warbaahinta cross-madal taageertaa dhammaan video maqal iyo qaabab. Sidaas waa doorashada ugu fiican ee ciyaartoyda warbaahinta cad. Marka laga reebo ciyaaro files VOB, VLC sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro files qaabab video kale oo QuickTime iyo Windows Media Player ku guuldareysto inuu natively ciyaaro.
Download ciyaaryahan VLC VOB ka site VLC .
MPlayer waa fursad kale oo fiican oo ah sida ciyaaryahanka VOB kale. Ma ahan sida loo jecel yahay sida ay media player VLC, laakiin waxa uu sidoo kale soo bixi labada Windows iyo Mac kumbiyuutarada oo uu leeyahay tiro balaadhan oo ah taageero qaab video. Waa awood u dib ugu ciyaaro MPEG / VOB ah, ASF / WMA / wmv, cancer, QT / MOV / MP4, AVI, qaabab Ogg / OGM iyo wixii la mid ah.
Download ciyaaryahan MPlayer VOB ka site MPlayer .
The UMPlayer waa socon guud-dhufto (waxaa lagala soo bixi karaa rogtid oo aad Windows, Mac OS X iyo Linux ka hawlgala nidaamyada), waana mid aad u fudud in ay maraan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la buuxiyey oo la dhisay-in feature laga bilaabo liiska balaadhan ee qaabab file taageeray in codecs waafaqsan sidoo kale awood u leh inuu sii qulquli ama faylasha dhamaystirnayn loo maqli karo. Haddii aad ku guuldareystay inuu ka soo dejisan files aad jeceshahay, waxaad leedahay shaqo oo taariikhqorihii ahaa sida aad raad raac!
Waxaad si fudud u heli karaa aqoon u leh ka KMPlayer leh waa user-friendly iyo interface sahlay. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaad shakhsiyeeyo karaa interface la hargahood oo laysku beddelid karo iyo visualizations sidoo kale ka faa'idaysanaya waxaa la dhisay-in video iyo codec audio. Waxa kale oo aad ay hagaajin kartaa nooca aad video loo maqli karo la beddelo guryaha, fool dheeraad ah, codsiyada filter iyo wax ka badan. Garo waa maxay? Qaabab 3D ayaa sidoo kale taageeray in ay tahay ugu dambeeyay waxa cusub ee aad u!
Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan Madaxweyne Siilaanyo oo taariikhqorihii 360 screen
Sidee ku cadaadisaa H264 File
Sida loo rogo ama Videos ka iyo in H.265 Files